Global Voices teny Malagasy » Yemenita Mpikatroka Mafàna Fo Mahazo Fandrahonana Ho Faty Ao Amin’ny Facebook · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Janoary 2014 9:09 GMT 1	 · Mpanoratra Afrah Nasser Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Yemen, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Nahazo fandrahonana ho faty tao amin'ny boaty famelàna hafatra ho azy tao amin'ny Facebook i Hani Al-Junid , Yemenita mpikatroka mafàna fo ara-politika manana ny lazany. Ilay mpikatroka, izay sady manao ny asan'ny mpanangom-baovao ho an'ny gazety tsy miankina ira ao an-toerana “Al-Sharae”, dia miteny fa olon-tsy fantatra no nanao ilay fandrahonana, izay tena raisiny am-po tokoa.
Ilay fandrahonana tamin'ny 21 Desambra dia nampitandrina hoe “akaiky ny farany” ho an'i Al-Junid. Fantatra amin'ny hafanam-pony ara-politka i Al-Jinid amin'ny fanoherany ny Jeneraly Ali Mohsen al-Ahmar, kaomandy ambonin'ny andiany voalohany amin'ny Vondron-tobin'ny Fiara Mifono vy nanafika ny Anjerimanontolon'i Sanaa sy ny famoriam-bahoaka tao Al-Arateet. Ny tena mbola manan-danja kokoa, dia fantatra izy amin'ireo karazana lahatsoratra  [ar] miaty hanihany fandranitana, tsy miandany, sosialista fanaony.
Mivaky  [ar] hoe ilay hafatra fandrahonana :
Vantany vao nahazo ilay fandrahonana i Al-Junid, navoakany tao amin'ny rindriny FAcebook ny dikasarin'ilay izy. Nanoratra  izy hoe:
Tsy namako ity olona ity ary tsy fantatro velively. Nanomboka nandefa hafatra ho ahy izy nilaza hoe nangatsiaka ary nila divay. Niteny taminy aho fa tokony hifandray amin'i Ali Mohsen  sy Abdelwahab Tawaf  izy, satria izy ireo no hany mpamatsy divay an-tsokosoko. Fotoana elaela taty aoriana, nilaza izy fa akaiky ny farandroko”
Raha toa ka nisitraka fahalalahana maneho hevitra ngeza be i Yemen taorian'ilay fitroarana tamin'ny 2011, dia nampafanafàna an'io fahalalahana vaovao vao azo io ny firongatry ny trangan-javatra fandrahonana sy herisetra atao amin'ny media mpampahalàla vaovao. Ny tranga mahazo an'i Al-Junid dia iray monja amin'ireo andianà famelezana sy fandrahonana voarain'ireo vondrona media hafa. Efa niharan'ny fanaovana herisetra ara-batana  nataonà andian'olona tsy fantatra i Al-Junid taorian'ny nandaozany ny fihetsiketsehana iray tao amin'ny Anjerimanntolon'i Sanaa nitakiana ny fanajanonana ny fibodoan'ny tafika azy io tamin'ny Oktobra 2012
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/18/57043/
 Hani Al-Junid: https://www.facebook.com/algunidhani
 Ali Mohsen: http://simple.wikipedia.org/wiki/Ali_Mohsen_Al-Ahmar
 Abdelwahab Tawaf: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81
 fanaovana herisetra ara-batana: http://aloulaye.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=3659:0000-00-00%2000:00:00&Itemid=89